Wararkii ugu dambeeyay ee shirka doorashada ee maanta ka furmaya Caasimadda Muqdisho - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qeyb galaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, ra’iisul wasaaraha, duqa Caasimadda Muqdisho, sidoo kale waxaa ka qeyb galaya shanta madaxweyne goboleed ee dalka u badan Axadle.
Waxaa sidoo kale jira codsiyo dhowr ah oo lagu soo koobay doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii ay gaareen hoggaamiyeyaasha Soomaalida 17kii Sebtember.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka HirShabeelle ayaa kusii jeeda magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh / dhexe, waxaana hada si diiran loogu soo dhoweynayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Caasimadda Muqdisho.
Waxaa la dejin doonaa waqti xasaasi ah si loo gaaro go’aano dhab ah oo diirada lagu saaro doorashooyinka 2021, xaalada way adagtahay in la xaliyo oo kala guurka Soomaaliya ayaa hada ah.
Beesha Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale isha ku haya natiijada ka soo baxda shirkan oo ay si weyn u bogaadisay xukuumada R / wasaare Rooble.
Si kastaba ha ahaatee, dib u dhac yar ayaa ku yimid furitaanka shirka oo lagu waday inuu bilowdo 20-ka bishan, kadib isbedel ku yimid imaatinka qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, kaasoo dib u dhac ku yimid.
Somalia’s AU mediation efforts flopped after the FGS boycott